ဦးအောင်သောင်းကို ပစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့ သတင်းပေးတဲ့ အထဲမှာ ကျုပ်လဲပါတယ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အစိုးရကိုယ်တိုင် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက် ရန်သူသစ်
မန္တလေးမြို့သားတွေ နာရီစင်ကို ဖက်ထား မြို့ပြင် ရောက်သွားလိမ့်မယ် »
ဦးအောင်သောင်းကို ပစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့ သတင်းပေးတဲ့ အထဲမှာ ကျုပ်လဲပါတယ်
ဆွေ့ဆွေ့ ခုန် သွားတဲ့ လွှတ်တော် (ဖတ်ကြည့်ဗျာ)
ကျုပ်တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး ၁၅ ယောက်လောက်၇ှိတယ် ကဲ ဘာလုပ်မလဲပြော ကျုပ်ကို ကန့်ကွက် ရှုပ်ချလို့ရော ဂရုစိုက်မယ်ထင်နေလို့လား…
ကျုပ်က ပြည်သူတွေကို မသတ်ဘူးခဲ့ဘူး
ကျုပ်က ဘယ်သို့သော ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်း တွေကို မှ ခိုးတာ ၀ှက်တာ မလုပ်ဘူးခဲ့ဘူး
ကျုပ်က ရှင်းတယ် သခိုးကို သူခိုး ဓားမြကို ဓားမြ လို့ပြောတာ လွန်သလား
ကျုပ်ထပ်ပြောအုံးမယ် နောက် အများကြီးကျန်သေးတယ်
ကျုပ်ထပ်ပြောအုံးမယ် နောက်အများကြီး ဘလက်လစ်တွေ လာအုံးမယ်
သေခြာအောင် ကျုပ်ပြောမယ် မကြာခင် ရီပတ်ပလေကန်တွေ တက်လာတော့မယ်
၇ီပါပလေကန် ပေါ်လစီက တော့ရှင်းတယ်
မျက်နှာ နှစ်ဖက် မလုပ်ဘူး
ခု ဦးအောင်သောင်း ကို သမ္မတကြီး အိုဗားမား လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်တာပဲရှိတယ်
သမ္မတအမိန့်အရ ဆိုပြီး ချက်ခြင်းပြန်ဖျက်လို့မရဘူး
အမေ၇ိကန်က By Law ဗျ
By mouth မဟုတ်ဘူး
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ စစ်ပွဲကြီးတွေ လေယာဉ်တွေသုံးပြီးတော့တောင် ဗုံးကြီးတွေနဲ့ သွားပစ်သတ်တာ ခင်ဗျားတို့ လွှတ်တော်က ခုလို ကန့်ကွက်သလား?
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ခံနေရတဲ့ မုဒိမ်းမှုတွေကို ခင်ဗျာတို့ ခုလို ဆန့်ကျင်လို့လား?
တပြည်လုံး လယ်မြေတွေကို သိမ်းပြီး လယ်သမားတွေကို သီးစားပြန်ချတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး စစ်တပ်က လုပ်တာ ခင်ဗျားတို့ ကန့်ကွက်ခဲ့သလား?
နှစ်စဉ် ဒုက္ခသယ်တွေကို ထောင်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်နေတဲ့ အစိုးရကို ခင်ဗျားတို့ အယုံကြည်မရှိ အဆို တင်သွင်းရဲခဲ့ကြသလား?
ခင်ဗျားတို့ လွှတ်တော်မှာ ခတ်ကြောင်ကြောင်အဆိုတော်လဲ အမတ်ဖြစ်
ခင်ဗျားတို့ လွှတ်တော်မှာ ခတ်ရွရွ ဖာစိတ်ဝင်နေသူမတွေလဲ အမတ်ဖြစ်
ခင်ဗျားတို့ လွှတ်တော်မှာ လူများစွာ သတ်ဖြတ်သူလဲ အမတ်ဖြစ်
ခင်ဗျားတို့ လွှတ်တော်မှာ သူခိုးတွေလဲ အမတ်ဖြစ်
ခင်ဗျားတို့ လွှတ်တော်မှာ အမတ်ဖြစ်သူတွေအားလုံး အကတိတရား(၄)ပါးကို အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တခုခုနဲ့ ထိစပ်ပြီး အကြိုက်ခုံမင်ခဲ့သူတွေကြီးပဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျနော့ကို တရားစွဲမလား။
ဦးရွှေမန်း ကျုပ်ကို တရားစွဲမလား
နောက်ဆုံး ဦးအောင်သောင်းရော တရာစွဲမလား။
ခင်ဗျားတို့ တစ်ယောက်မှ ကျုပ်ကို တရားမစွဲရဲဘူး
ခင်ဗျားတို့အားလုံး ပရောဂ ၀င်နေလို့ အခု အမေရိကန် ရေမန်းနဲ့ တွေ့ပြီး ဆွေ့ဆွေ့ခုန်သွားကြတာ ကျုပ်သိတယ်…..
ကြိုက်လျင်ရှယ် ကျုပ်ကတော့ ဒဲ့ပဲဗျာ
This entry was posted on November 12, 2014 at 8:39 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One Response to “ဦးအောင်သောင်းကို ပစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့ သတင်းပေးတဲ့ အထဲမှာ ကျုပ်လဲပါတယ်”
drkokogyi Says:	November 12, 2014 at 9:20 am | Reply Aung Kyaw Soe နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခံရသူအတွက် ဘယ်အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရလို့ လေဆိပ်တွေမှာ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးပျက်ပြားစေတဲ့ အိုဘားမားအလိုမရှိဆိုတာကြီးကို လူစုလူဝေးနဲ့ ဘယ်သူကခွင့်ပြုချက်ယူပြီး ဘယ်သူက ခွင့်ပြုထားသလဲဗျာ။
နာယကကြီးက နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်တိုင်းတာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက လူတွေအားလုံး သူခိုးသူယုတ်တွေဆိုပြီး ဘယ်မအေလိုးကမှ မထင်ဘူးဆိုတာတော့ ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်။
တဦးတယောက်မကောင်းတိုင်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို နာမည်ပျက်အောင်လုပ်ပြီး တပါတီလုံးက သူခိုးသူယုတ်တွေဘက်မှ သူခိုးအားပေး သူယုတ်ကာကွယ်ပေးနေမှသာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဟာ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်တဦးကြောင့် တပါတီလုံး စော်ကားခံရမည့်ဘဝရောက်သွားမှာပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မကောင်းတိုင်း ပါတီဝင်တိုင်း မကောင်းဘူးလို့ဘယ်လိုမှ တထစ်ချ မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက ပါတီကို ခုတုံးလုပ်ပြီးနာမည်ပျက်အောင်လုပ်နေတာတွေကို ပါတီကလူတွေက ပိုပြီးတော့တောင် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ် အပြစ်ရှိမရှိစုံစမ်းအရေးယူပေးတတ်မှသာ ပါတီကို ပြည်သူတွေကလည်း လေးစားယုံကြည်လာမှာပါ။
အခုတော့ လူတဦးကို နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းလိုက်တာနဲ့ တပါတီလုံး အဖွဲ့ဝင်အားလုံး နာမည်ပျက်နဲ့ လုပ်စားနေသူတွေဆိုပြီးပေါ်လွင်အောင် နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်ဘက်က နာပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပါတီဟာ ဘာပါတီလည်းဆိုတာ လူထုကိုထုတ်ပြောနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒေါ်စုမကောင်းတိုင်း ဒီချုပ်တခုလုံးမကောင်းဘူးလို့ ပြောလို့မရသလို နာယကကြီး နာမည်ပျက်တိုင်း ကြံ့ဖွံ့တပါတီလုံး နာမည်ပျက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဘူးဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။
နာမည်ပျက်နေသူဟာ တကယ့်သူခိုးသူယုတ်တွေဟုတ်မဟုတ် သေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီး အရေးယူမှသာ ပါတီဟာ ပြည်သူ့အတွက်ပါတီဖြစ်ပြီး သူခိုးသူယုတ်ပါတီမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြည်သူတွေသိမှသာ အသဲကြားက မဲတပြားကို ပြည်သူတွေဆီက သေနတ်မထောက် မယုတ်မာပဲ ရနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း စေတနာရှေ့ထားကာ တင်ပြပါရစေ။
နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကို ထိပါးစေမည့် အခုလိုဆန္ဒပြဖို့ ဘယ်သူခွင့်ပြုမိန့်ပေးတာလဲ။ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်ပြန်လှန်ပြပြီး ကြံ့ဖွံ့ပါတီဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် ဖိအားပေးလုပ်နေတဲ့ တရားခံဟာ ဘယ်သူလဲဟေ့။